SHEEKH UMAL: “Soomaalida fikrad kasta oo ay ku kala duwan yihiin waa inay ilaaliyaan masaalixda guud ee dalka” – Maanta Online
SHEEKH UMAL: “Soomaalida fikrad kasta oo ay ku kala duwan yihiin waa inay ilaaliyaan masaalixda guud ee dalka”
Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo ka mid ah culumaa’udiinka caanka ah ee Soomaaliyeed ayaa farriin culus waxa uu u guud ahaan shacabka Soomaalida qeybihiisa kala duwan, gaar ahaan siyaasiyiinta, wadaadada, qabiilada iyo kooxaha ururrada kala duwan ee dalka ka jira.
Sheekh Umal oo maalmahaan ku sugnaa magaalada Muqdisho kaddib markii uu ka yimid dalka Kenya halkaasi oo uu sheekhu degan yahay ayaa isagoo u waramayay idaacadda dowladda ee Radio Muqdisho waxa uu si faahfaahsan oo diini ah uga hadlay khilaafyada soo kala dhex gala bani’aadamka ku nool adduunka korkiisa.
Waxa uu sheegay, taasi oo uu sheegay in axkaamta iyo shareecada Islaamka ku cadahay kala aragti duwanaanshaha dadyowga caalamka ku nool haddii ay yihiin siyaasiyiin, wadaadada iyo qabiilada beelaha Soomaalida, wuxuuna sheegay Sheekh Umal in hadda dalka aanay ka jirin xiisadaha u dhaxeeya qabiilada Soomaaliyeed.
“Soomaalida fikrad kasta oo ay ku kala duwan yihiin ilaaliyaan masaalixda guud iyo danaha dadka ka wada dhaxeeya” ayuu yiri Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo sheegay in khilaafyo siyaasadeed ay isku hayaan Soomaalida isla markaana dhaqamo qabyaaladeysan u rogaya mabda’a ay aaminsan yihiin.
Diinta Islaamka iyo axkaamta ayuu sheegay Sheekha in qabiilka ay tilmaamayaan diinta Islaamka jiritaankeeda si ay isugu aqoonsadaan isla markaana ay ku jirto masaalixda danaha u dhaxeeya iyo nasabka asal ahaan ay ka soo jeedaan.
Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo joojiyay muxaadaro uu ku qaban lahaa garoonka Kubadda Cagta ee Eng. Yariisow ex Stadium Conis magaalada Muqdisho kaddib markii uu si cad uga hor yimid Sheekh C/qaadir Soomow oo ka tirsan dariiqada Suufiyada isla markaana ku eedeeyay Sheekh Umal muxaadarooyin uu horay u soo saaray kuwaasi oo meel ka dhac ku ah Nabi Muxamed CSW iyo in dad badan ay u geeriyoodeen fadwooyin diini oo uu faafiyay.
Dhinaca kale Dowladda federaalka Soomaaliya oo aqbashay dalabka Sheekh Umal ee ah joojinta muxaadaradii uu ku qaban lahaa garoonka Eng. Yariisow, ayaa u bedeshay inuu Sheekha muxaadaradiisa ku baahiyo Radio Muqdisho, isagoona halkaasi uga jawaabaya su’aalaha diiniga ah ee ay dadweynaha soo weydiiyaan.
← Ra’iisal Wasaarayaal hore oo ka qeyb galay soo dhoweynta shaqsi magac weyn ku leh Isboortiga Soomaaliya Dr. Cali Cusmaan
From a Stall in San Diego, a Somali Tailor Weaves a New Life →
Xaaladda Gedo iyo maamulka Axmed Madoobe oo qarka u saaran inuu gacantiisa ka baxo gobol muhiim ah